Mwepe emepe zuru oke nke ókèala US maka ndị ọbịa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ogologo oge
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mwepe emepe zuru oke nke ókèala US maka ndị ọbịa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ogologo oge
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mwepe ịmalite njem mba ofesi na United States iji nye ndị mmadụ ọgwụ mgbochi zuru oke agafeela, ọ ga -ewetakwa akụnụba US, azụmaahịa nnukwu na obere, yana ebe gafee America.
A ga -ahapụ ndị ọbịa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ka ha banye US site na ịgafe oke ala malite na mbido Nọvemba.
Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa ekpebisibeghị ọgwụ mgbochi US ga -amata.
A ga -ekwuputa ụbọchị a ga -ebuli mmachi njem ahụ “n'oge adịghị anya”.
Ndị isi ọchịchị nchịkwa US kwupụtara na malite n'isi ọnwa na -abịa, US Ngalaba Homeland Security ga-ahapụ ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke megide coronavirus site na mmachi njem na-adịghị mkpa na-arụ ọrụ ugbu a na ókèala ala US abụọ.
Iwu a, nke onye odeakwụkwọ nchekwa obodo Alejandro Mayorkas ga -ekwupụta taa, ga -ekpuchi oke ala na ụzọ ụgbọ mmiri. Ha yiri otu mana ha abụghị otu ihe achọrọ nke ekwuputara n'ọnwa gara aga maka ndị njem ikuku mba ụwa, ndị ọrụ kwuru.
A ga -ekwuputa ụbọchị a kapịrị ọnụ na mbido Nọvemba mgbe a ga -ebuli mmachi ahụ "n'oge adịghị anya," otu onye ọrụ US kwuru.
US Customs na ókè-ala Nchedo ga -anabata akwụkwọ ma ọ bụ ihe akaebe dijitalụ nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ndị ọrụ US kwuru. Ndị Ụlọ Ọrụ nke Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) ekpebisibeghị ọgwụ mgbochi US ga -amata, ndị isi kwukwara.
Ndị Njem Njem US wepụtara nkwupụta na -esote na ọkwa a ga -ebuli mmachi na njem ókèala ala US na Canada na Mexico maka ndị ọgwụ mgbochi:
“Njem njem US agbaala ogologo oge ịmalitegharị ókèala ala US, anyị na -eto atụmatụ nchịkwa Biden iji belata mgbochi mbata maka ndị ọbịa ọgwụ mgbochi. Omume a ga -eweta nnabata nnabata na njem site n'ahịa isi mmalite abụọ nke njem mbata.
“Ndalata na nleta mba ụwa kemgbe mmalite nke ọrịa ọjọọ akpatala ihe karịrị ijeri $ 250 na ego mbupụ na -efu na ihe karịrị otu nde ọrụ US. Oke ala Canada na Mexico mechiri emechi naanị na -efu akụ na ụba US ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 700 kwa ọnwa.
"Mwepegharị njem mba ofesi na United States iji nye ndị mmadụ ọgwụ mgbochi zuru oke agafeela, ọ ga -ewetakwa akụnụba US, azụmaahịa nnukwu na obere, yana ebe gafee America."